एकीकृत जनक्रान्ति गर्न नेकपाको आर्थिक अभियान सुरु – Rapti Khabar
एकीकृत जनक्रान्ति गर्न नेकपाको आर्थिक अभियान सुरु
प्रहरीविरुद्ध २५ दिने ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रहरीविरुद्ध ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको छ । प्रहरीले नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइरहेका बेला ने.क.पा.को कैलाली जनअदालतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक असईलाई ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको हो।
नेकपाको जनअदालत प्रमुख विकासको नामबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीमा राष्ट्रिय अनुसनधान विभागका असई भैरव कुँवरलाई ‘२५ दिनभित्र उपस्थित हुन’ भनिएको छ।
अनुसन्धान विभागमा असई पदमा कार्यरत कुँवरमाथि नेकपाका नेता कार्यकर्ताको सुराकी, अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
‘बाटोका म्यादबाहेक २५ दिनभित्र आफैं वा पक्राउ पुर्जी बमोजिम पक्राउ परी यस अदालतमा हाजिर हुन आउनु होला’, उक्त पुर्जीमा उल्लेख छ।
असई कुँवरकाविरुद्ध नेकपाका कार्यकर्ता ’तुफान’ ले अभियोग दर्ता गराएको र जनसरकार प्रमुख अनुकलले प्रतिवेदन बुझाएकाले सोहीका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जनअदालतले जनाएको छ । आफैं वा पक्राउ परी आएमा जनअदालतले व्यवहार बुझेर जनअदालतको कानुनअनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ।
तोकिएको म्यादमा उपस्थित नभएमा जुनसुकै कारबाही गर्ने चेतावनी नेकपाले दिएको छ। ‘म्याद गुजारी फरार रहेमा देश र जनताको हितविरुद्ध नेता कार्यकर्ताको सुराकी, हत्या, अपहरण र यातनामा संलग्न रहेको पाइएमा, जिल्ला जनसुरक्षा विभागलाई जुनसुकै बेला पनि कारवाहि गर्न आदेश दिइएको छ’, चेतावनीपत्रमा उल्लेख छ।
शक्तिशाली विद्रोहको धक्का आवश्यक
Posted on August 2, 2019 Author Rapti Khabar
विरेन्द्र शाह मानिसहरु खै कुन्नि किन हामीलाई मात्रै विद्रोही देख्छ्न । यो विद्रोह भन्ने कुरा मानव जिवनको उत्त्पति बाटै नै शुरु भएको विषय हो । मानवजाती ले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सबै कालखण्डहरु विद्रोहमा गुजारे र आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्दै यहाँ सम्म आईपुगे र अहिले नयाँ खालका राजनीति विद्रोह र संघर्षहरु विश्वभरी चलिरहेका छ्न । […]
काठमाडौं- एप्लिकेसनमार्फत मोटरसाइकलमा यात्रु बोक्दै आएको पठाओले ट्याक्सी सेवासमेत सुरु गरेको छ। कम्पनीले आफ्नो एपबाट ट्याक्सी बुक गरे एक सय रुपैयाँ अतिरिक्ति शुल्क यात्रुसँग असुल्ने भएको छ। पठाओ एपमार्फत ट्याक्सी बुक गर्नेले मिटरमा उठेको रकमभन्दा एक सय रुपैयाँ बढी अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनीले गरेको छ। यसले यात्रु उपभोक्तालाई सो एपमार्फत ट्याक्सी प्रयोग गर्दा महँगो […]
पुर्बराजा ज्ञानेद्रले वृद्ध आमालाई उपचार गर्न नेताहरु झै सिङ्गापुर किन नलगेका ?
बिरामी त ‘राजा’ ज्ञानेन्द्र पनि हुँदा हुन् । उनकी वृद्ध आमाको स्वास्थ्य पनि त्यत्ति राम्रो छ भन्ने सुनिन्न । तर तिनलाई उपचार गर्न विदेश नै जानुपर्छ भन्ने ज्ञान किन नआएको होला ? त्यत्रो दुई सय वर्षभन्दा बढ़ी शासन गरेको राजसंस्थाका अन्तिम शासक ज्ञानेन्द्रको हल्ला गरिएजस्तो विशाल सम्पत्ति पनि देखिएन । अन्य देशका राजधानीमा प्रायः हरेक […]
युएई पुगेर संसारकै महँगो होटेलमा बसेका प्रचण्ड परिवार आजै फर्किदैन
‘हेगले हल्लिएका प्रचण्ड’